TweetDeck for Mac သည်လေးနက်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
TweetDeck for Mac သည်မှတ်ဥာဏ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုဖြေရှင်းရန်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
သို့သော်အမှန်တရားမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူတို့ကြေငြာခဲ့သည် သူတို့သည် Mac application ၏ထောက်ပံ့မှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည်အသုံးပြုသူများကိုမကြိုက်သည့် web client ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအဖြစ်ထားခဲ့ပြီး၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က TweetDeck လူကြိုက်များလာခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အခုတော့အမှန်တရားပဲ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းက macOS မှာပြproblemနာသေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်.
တရားဝင်အတည်ပြုထားသည့်အတိုင်းလျှောက်လွှာ အတော်များများကကွန်ပျူတာများအတွက်အတော်လေးအလွန်အကျွံ RAM ကိုမှတ်ဉာဏ်စားသုံးခဲ့သည်၎င်းသည်အချို့သောအချိန်များတွင်အရင်းအမြစ်များမြင့်မားစွာသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ကွန်ပျူတာအလွန်အမင်းအပူလွန်ကဲနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်မျှမျှတတရိုးရှင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ယုတ္တိမတန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဓိကအချက်မှာမကြာသေးမီကဖြစ်သည် ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့က Mac App Store ကနေတစ်ဆင့် update အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်အချို့သူများအကြား၊ ဤအချိန်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ရာတွင်နည်းပညာအဟောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ယခုအချိန်၌သူတို့သည်အဟောင်းသုံးစက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုအတော်အတန်လျော့နည်းစေသည်ဟုမှန်သော်လည်း၊ MacOS 10.10 နဲ့အထက်:
ယခုဗားရှင်းသည် web view အကောင်အထည်ဖော်မှုဟောင်းကို WKWebView ပေါ်တွင်အခြေခံထားသောခေတ်သစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့် MacOS ၏အနည်းဆုံးထောက်ပံ့ထားသော version သည်ယခု ၁၀.၁၀ (Yosemite) ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ TweetDeck မှတစ်ဆင့်သင်၏ Mac နှင့်တွစ်တာကိုအသုံးပြုလိုပါကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လျှောက်လွှာကိုအမြန်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သင်ကအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ် Mac App Store မှဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » TweetDeck for Mac သည်မှတ်ဥာဏ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုဖြေရှင်းရန်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
၎င်းသည် Face ID ပါသော MacBook Pro အသစ်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအယူအဆဖြစ်သည်
Apple Pay သည်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်